Steam (serivisy) - Wikipedia
Steam dia serivisy fizarana nomerika lalao video nataon'i Valve. Navoaka ho toy ny mpanjifa rindrambaiko mahaleo tena amin'ny volana septambra 2003 ho lalana ho an'i Valve hanomezana fanavaozana ho azy ireo amin'ny lalaon'izy ireo, ary nitarina mba hampiditra ny lalao avy amin'ireo mpamoaka antoko fahatelo. Steam dia nitombo ihany koa amin'ny fivarotana digital nomerika sy mobile. Ny Steam dia manolotra fitantanana ny zon'ny digital (DRM), fampiantranoana mpizara, streaming video ary serivisy tambajotra sosialy. Izy io koa dia manome ny mpampiasa ny fametrahana sy ny fanavaozana ho azy ny lalao, sy ny fampisehoana an-tariby toy ny lisitry ny namana sy ny vondrona, ny fitahirizana rahona ary ny feo amin'ny lalao sy ny chat.
Ilay rindrambaiko dia manome anton-dresaka fandaharana fampiasa amin'ny fampiharana maimaim-poana (API) antsoina hoe Steamworks, izay azon'ny mpamolavola hampiasaina hampiditra ny asan'ny Steam amin'ny vokatra-dry zareo, ao anatin'izany ny zava-bita ao amin'ny lalao, microtransactions, ary ny fanohanana votoaty noforonina amin'ny alàlan'ny atrikasa Steam. Na dia novolavolana ho fampiasa amin'ny rafi-pandaminana Microsoft Windows aza tany am-boalohany, navoaka ihany ireo dikan-teny ho an'ny macOS sy Linux. Navoaka ihany koa ny rindranasa finday ho an'ny iOS, Android ary Windows Phone tamin'ny taona 2010. Ity sehatra ity dia manolotra fisafidianana kely momba ny votoaty hafa, ao anatin'izany ny rindrambaiko famolavolana, hardware, ny fanamafisam-peo lalao, ny anime ary ny sarimihetsika.
Ny sehatra Steam no sehatra fizarana nomerika lehibe indrindra ho an'ny filalaovana PC, izay mitentina manodidina ny 75% amin'ny haben'ny tsena tamin'ny 2013. Tamin'ny taona 2017, ny mpanjifa mividy lalao amin'ny Steam dia mitentina $ 4,000 miliara dolara, izay maneho ny farafahakeliny 18% amin'ny varotra PC PC manerantany. Tamin'ny taona 2019 dia nanana lalao mihoatra ny 34000 ny serivisy misy mpampiasa maherin'ny 95 tapitrisa isam-bolana. Ny fahombiazan'ny Steam dia nahatonga ny fivoaran'ny tsipika microconsoles Steam, izay ahitana ny rafitra fiasan'ny SteamOS sy ny mpitantana ny Steam.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Steam_(serivisy)&oldid=993845"
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2020 amin'ny 11:18 ity pejy ity.